Black Shark 2 Pro: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị | Gam akporosis
Obere izu gara aga ka ekpughere yana ụbọchị ngosi nke Xiaomi Black Shark 2 Pro. Ọhụrụ ịgba chaa chaa ama ama nke China na-emesị bụrụ ndị ọrụ. Ngwaọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ na-achọ ikwenye ọnọdụ ya dị ka otu n'ime ụdị ndị kachasị mkpa na mpaghara ahịa a ruo ugbu a. Ha na-eme ya na ihe nlere nke puru iche maka ike ya.
Izu ndị a anyị enweelarị ike ịhụ nke ahụ arụmọrụ ọ gaghị abụ nsogbu maka ekwentị. Mgbe ASUS ROG ekwentị II ẹkenam izu abụọ gara aga, Black Shark 2 Pro bụ ekwentị nke abụọ n'ahịa ịbata na Snapdragon 855 Plus dị ka ihe nhazi, mgbawa kachasị ike ebe ahụ taa.
Nhazi nke ekwentị na-ekwusi ike yiri akara na ụdị ndị gara aga nke ika China. Akụkụ ndị dị n'azụ na-apụta karịa ihe niile, nke oge a bịara na agba anọ: Bolt (nwa-acha akwụkwọ ndụ-acha akwụkwọ ndụ), Racing (acha anụnụ anụnụ-acha ọbara ọbara), Flamingo (ọbara ọbara-oji), Igwe oyi (isi awọ-acha anụnụ anụnụ) na Myth Ray ( acha odo odo). Ya mere, anyị na-eche ihu nhazi egwuregwu.
1 Nkọwapụta Xiaomi Black Shark 2 Pro
Nkọwapụta Xiaomi Black Shark 2 Pro
Nhazi ahụ nwere ike ịhapụ obere mgbanwe ma ọ bụ akụkọ, mana Xiaomi ejirila iwebata ọtụtụ mgbanwe na ime nke Black Shark 2 Pro a. Ya mere, anyị na-ahụ ekwentị dị ike, na nhazi kacha mma na mpaghara a. Ya mere, anyị nwere ike ịnụ ụtọ egwuregwu ogologo oge. Nlereanya nke nwere ike ịga nke ọma na mpaghara ahịa a. Ndị a bụ nkọwa ekwentị:
Ihuenyo: 6.39-anụ ọhịa AMOLED na Mkpebi: 2340 x 1080 pikselụ, nha: 19.5: 9 na Nwee ume ọhụrụ: 240 Hz
Nchekwa ime: 128/256/512GB
Igwefoto na-aga n'ihu: 48 MP + 13 MP nwere oghere f / 1.75 na f / 2.2 na mbugharị 2x na Flash Flash
Njikọ: Dual band WiFi, USB-C, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, 4G / LTE
ndị ọzọ: On ihuenyo ngwa anya mkpisiaka ihe mmetụta, NFC, Liquid jụrụ 3.0, DC Dimming 3.0
Batrị: 4000 mAh na 27W ngwa ngwa
Akụkụ: 163,61 x 75,01 x 8,77mm.
Usoro njikwa: Akara 9 Android na MIUI
Otu n'ime isi mgbanwe na Black Shark 2 Pro abịarutela na ihuenyo ya. Akara ndị China na-ahapụ anyị ogwe aka nke 6,39 nke anụ ọhịa ahụ, mana nke ahụ pụtara ìhè na nkwụghachi ume ya nke 240Hz. Ọ bụ ego pụrụ iche na ama, nke ga-enye anyị ezigbo ahụmịhe onye ọrụ na nke a. Otu akụkụ nke na-emeri ọtụtụ ndị ọrụ na nke a. Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ egwuregwu egwuregwu dakọtara na oge.
Anyị na-achọta igwefoto abụọ dị n'azụ, yana ihe mmetụta 48 MP na ihe mmetụta 13 MP. Mgbe anyị nọ n'ihu anyị nwere ihe mmetụta 20 MP. Batrị bụ akụkụ ọzọ dị mkpa na Black Shark 2 Pro, nwere ike nke 4.000 mAh. Ọ ga-enye anyị ezigbo obodo kwụụrụ onwe ya ma ọ ga - abịa ọsọ ọsọ nke 27W. Ya mere, anyị nwere ike ịgba ụgwọ batrị niile ngwa ngwa. Ejikọtara ihe mkpịsị aka mkpịsị aka n'ime ihuenyo ekwentị. Tụkwasị na nke ahụ, akara ndị China na-ahapụ anyị na DC Dimming 3.0 na usoro ihe mmiri mmiri ọhụrụ, maka ịrụ ọrụ ka mma nke ngwaọrụ ahụ.
Ekwentị ekwuputala ọkwa maka oge na China, nke bu nani ahia nke emere ka akwado ya. O yikarịrị ka anyị ga-echere izu ole na ole ka ọ malite na Europe. Agbanyeghị na igwe eji egwu egwu enweghi akara kacha mma na Europe. Ya mere, anyị nwere ike ichere obere oge tupu ọ bịa n'ụzọ gọọmentị. Anyị ga-ege ntị na akụkọ.
Black Shark 2 Pro na-ere ere na nsụgharị abụọ na China, onye ọnụ ahịa ya bụrịrị gọọmentị. Ha na - enyere anyị aka ịmata ihe ekwentị ga - efu mgbe a malitere ya na Europe. Versionsdị nsụgharị abụọ ahụ na ọnụahịa ha bụ:
Ihe nlere anya nke 12/128 GB di na 2.999 yuan (euro 390 na mgbanwe)
Ejiri usoro 12/256 GB jiri ọnụahịa nke 3.499 yuan (euro 456 gbanwee)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Black Shark 2 Pro: Xiaomi ọhụrụ ama egwuregwu
Google Pay akwụ ụgwọ na ụlọ akụ ọhụrụ na Spain